फाफुरा २० बेठेगान बल र बोली
बाह्रखरी - ब्रजेश खनाल मंगलबार, साउन १, २०७५
हुन त हेर्नुस्, मानिसका विश्वास, मूल्य र मान्यता भन्या समयअनुसार फरक हुँदै जान्छन् । जुन काल र परिवेशमा मानिस बाँचेको छ, जेजस्ता उसका अनुभव छन्, त्यहीअनुसार सबै निर्धारण र परिवर्तन हुने हो । फाफुरा र ऊजस्ता तपाईँ हामी आम नेपालीको कुरा गर्दा अहिले सबैभन्दा बेठेगानको वस्तु दुइटा छन् – बल र बोली । बोली भनेको नि हजुर फेरि वोली भनेको पढ्नुहोला र फाफुराले बालुवाटारको चिया खान पर्ला ।
भर्खर भकुण्डोको विश्वकप मारामारी सकिएको छ । हामी नेपाली जनतालाई भकुण्डोसँग अगाध स्नेह छ । किनभने सदियौंदेखि हामी आफैँ पनि भकुण्डो नै बनिरहेका छौँ । परिवर्तनको नाममा नयाँ नयाँ खेलाडीहरु आउँछन् । टिमको नाम फेरिन्छ । उनीहरुले लगाउने जर्सी कट्टु र जुत्ता पनि समयसमयमा परिवर्तन भइरहन्छ । तर हाम्रो नियति कहिले पनि फेरिँदैन । हामीलाई उनीहरु यताबाट उता गुडाउँछन्, न्वारान देखिको बल लगाएर लात्ताले उडाउँछन्, थचार्छन्, थिच्छन् अनि हामीलाई जालीभित्र छिराएर खुसी हुन्छन्, मुठ्ठी कस्दै कराउँछन्,
रमितेहरु दंग पर्छन् । थपडी बजाएर उफ्रिन्छन् । हामी आफ्नो चोटबाट तङ्ग्रिन पनि पाएका हुन्नौ, टप्प टिपेर मैदानको बीचमा लगिन्छौँ । फुटबलमा रेफ्री कहिले कुन देशको हुन्छ, कहिले कुन देशको । उसले पिर्र पारेर सिठ्ठी फुक्छ । हामी फेरि मैदानभरि गुडाइन थाल्छौँ । भूपिले पनि भन्थे, “हामी क्यारेमका गोटी हौँ ।” फाफुरा भन्छ, “हो कविज्यू ! आजकल त हामी क्यारेमका गोटीमात्रै नभै फुटबलको भकुण्डो पनि हौँ ।”
हाम्रो आफ्नो पनि त्यही नियति भएको हुनाले होला भकुण्डो हामीलाई प्रिय छ । त्यसैले अरुबेला फुटबल नहेर्नेहरु पनि विश्वकप भनेपछि त्यसलाई छुटाउँदैनौ । भलै गोलकिपरको एलबीडब्ल्यू भएको पनि अम्पायरले दिएन भनेर उफ्रिँदै भए पनि हामी रातबिरात निन्द्रा बिगारेर भकुण्डो हेर्छौँ ।
विश्वकप चलुन्जेल केही सातादेखि फाफुराको टोलको चिया पसलमा पनि लात्ते भकुण्डाको सानोतिनो सत्ता बजार चल्ने गरेको थियो । एक कप चिया, चिया र डोनट, फुल चिया सेट (जसमा चनाको तरकारी समेत हुन्छ) देखि लिएर नगदमा पचासदेखि एक हजारसम्मको बाजी त्यहाँ लाग्ने गथ्र्यो । फाफुरा पनि मौकामा चौका हान्दै आफ्नो गच्छेअनुसारको बाजी लगाउन पल्केको थियो । तर, यसपटक उसको ग्रहदशा खराब भएर हुनुपर्छ उसले जसजसको पक्षमा बाजी लगायो, ती सबै चुनावको कांग्रेस हुन थाले । हुँदाहुँदा क्वार्टर फाइनलसम्म आइपुग्दा त फाफुरा अरु सत्ताखोरहरुको लागि वरदान बन्न पुग्यो । चलाख खेलाडीहरु फाफुराले जुन टिम छान्यो त्यसको विपक्षमा बाजी थाप्न र जित्न थाले । एक जना उदारमना महापुरुषले त फाफुरालाई यतिसम्म भने,
फाफुराले उसको त्यो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गर्‍यो । ढाँटेको होइन, फाफुराको यो गौरवशाली परम्परा अस्ति रातिको फाइनल खेलसम्म पनि टुटेन । त्यही खुसीमा हिजो बिहान त ती मानिसले फाफुरालाई चिया र डोनटसँगै बोनस भनेर आलुको तरकारी पनि खुवाए । यसरी प्राकृतिक विपत्ति आइपरेको बेला पनि सक्नेहरुले त्यसैलाई ‘भजाएर’ आफ्नो दूनो सोझ्याए जसरी फाफुराले पनि आफ्नो बिछुकको फाइदा उठाएको थियो । हुन त खासमा भन्ने हो भने यसपटकको विश्वकपमा फफुरालाई विपरीत लाग्छ भन्ने कुराको संकेत त सुरुदेखि नै देखिएको थियो ।
विश्वकप सुरु हुनुअघि फाफुराले टोलका खम्बाहरुमा निकै दिनदेखि एउटा आकर्षक विज्ञापन टाँसिएको देखेको थियो । ‘मात्र सय रुपैँयामा घरघरमै आएर कलर टिभी बनाइन्छ ।’ विश्वकप लात्ती भकुण्डो सुरु हुन लागेको बेला त्यो विज्ञापनले फाफुराको आँखा तानेको थियो । यस्तो बेलामा मानिसहरु ऋण गरीगरी विश्वकपका लागि नयाँ टिभी किन्छन् भन्ने पनि उसले सुनेको थियो । फाफुरालाई पनि त्यसको रहर त नलागेको कहाँ हो र ? रहर लाग्दैमा कहाँ हुन्छ र ? नेपाल वायुसेवा निगमले स्थूल शरीर भएको चीलगाडी किनेजस्तो फाफुराले नयाँ टिभी किन्न सक्ने कुरा भएन । तर, टोलको खम्बामा टाँसिएको विज्ञापनले फाफुरालाई आशावादी बनाइदियो । उसले त्यसमा दिइएको नम्बरमा लगातार पाँच पटक मिस् कल गर्‍यो । आजित भएर त्यो मानिसले कल ब्याक गरेर हकार्‍यो,
“यो कहाँ पर्‍यो ?”
मोबाइलमा फोन गरेर कहाँ पर्‍यो भनेर सोध्ने पनि हामी नेपालीहरुको विशिष्ट पहिचानमध्येको एक हो । अरुबेला त यस्तो प्रश्नको उत्तरमा फाफुरासँग अर धेरै उरन्ठेउला उत्तरहरु हुन्थे । तर, यो त आफैले मिस कलको जाल हानेर पारेको माछो थियो । त्यसैले उसले मीठो स्वरमा भन्यो,
उताबाट हो भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि फाफुराले त्यस मानिससँग कुरा मिलायो । त्यहीअनुसार ऊ साँझ चार बजे टोलको माइक्रो बसपार्कमा आउने भयो । आजकल विदेश भ्रमणमा जाने हाम्रा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूहरुलाई त्यहाँका फाफुराकै औकातका प्युसा मन्त्रीले गर्ने जस्तै भव्य स्वागत गर्दै फाफुराले कलर टिभी बनाउने मानिसको सवारी आफ्नो डेरासम्म चलायो । अलिकति पर मेलम्ची निर्मित सानोतिनो समुन्द्र तर्न पर्ने थियो । त्यो मानिसले भन्यो,
“तपाईको कोठा पुग्न त ‘नाम लियो भने कारवाही हुने’ वस्तु पो चाहिने रहेछ त ।”
फाफुरा खिस्स हाँस्यो । बाधा अड्चन पार गरेर कोठामा पुग्नासाथ उसले सोध्यो, “खोई तपाईको टिभी ?”
फाफुराले कुनै नयाँ भवनको उद्घाटन गरेजसरी आफ्नो जीउ पुछ्ने मैलो रुमालले छोपेको टिभीको अनावरण ग¥यो । त्यो मानिसले जिल्ल परेर हालका टेलिभिजनहरुको रामापिथेकसलाई हेर्‍यो । अनि सोध्यो,
“सतको धनले किनेको टिभी हो । यसको खरीदमा कुनै अनियमितता वा छ्याकनको प्रावधान थिएन । वायु सेवा निगमको जहाज वा सडकको पिच हो र किन्न नपाई वा बन्न नपाई बिग्रिनलाई ? किनेको बेलादेखि अहिलेसम्म केही दुःख दिएको छैन यसले भाइ ।”
“बनाइदिनुस् न त कलर टिभी । यो ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट टिभी हो । नत्र वल्र्ड कप हेर्दा कहिलेकहीँ दुइटा टिमै छुट्याउन सकिँदैन ।”
कुनै बेला थियो जब मान्छे भन्ने गर्थे सबैभन्दा ठूलो कुरा मान्छेको बोली हो । नसक्ने कुरा बोल्नै हुँदैन, बोलेको कुरा नसक्नै हुँदैन । तर, त्यसपछि नेता र राजनीतिज्ञहरु भन्ने प्राणीहरुको उत्पत्ति भयो । उनीहरुले यो प्रथालाई ठ्याक्कै उल्ट्याइदिए । अब हुँदाहुँदा आजकल यस्तो अवस्था आइसक्यो, सबै मानिसहरु गफैले मात्र बम्बै कलकत्ता हाँक्ने भए । कसैको बोलीलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक नलिने भइसक्यो । बोलेको कुरा पुर्‍याउन नपर्ने भएपछि मानिसहरु ठूलाभन्दा ठूला गफहरु ठोक्न थाले । त्यसैले आजकल कसैको पनि बोलीको ठेगान हुन छाड्यो हेर्नुस् त । भन्ने बेला एक थोक भन्छन् तर गर्ने बेला केही नि गर्दैनन् । अथवा अर्कै थोक गर्छन् । अगुवाहरु नै ठगुवा अनि बाटो हगुवा हुन थालेपछि त्यसैको सिको गरेर माथिदेखि तलसम्मकाहरु घैँटे हान्न ओस्ताद हुन थाले । हामी हरेक ठाउँमा यस्तै भ्रामक नारा, वाचा र विज्ञापनले ठगिएका छौँ । फाफुराले कलर टिभी बनाउनेको उदाहरण त एउटा रमाइलोको लागि मात्र दिएको हो । उसको विज्ञापनको भाषाको कुरामा मात्र रमाइलो गरेको हो । तर, सवारी चालकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न एक वर्ष लाग्ने देशमा सय दिनको समय–सीमा राखेर गँजडीले पनि गर्न नसक्ने गफ गरेर चुनाप जित्न सकिने देश हो यो । त्यो कुरो त आफ्नै ठाउँमा छ नि कसो ?
अब विश्वकप सकिएको छ । फाफुरालाई पीर परेको छ । परिवार र साथीभाइ त भै हाले, सामाजिक सञ्जालमा समेत नचिनेका मानिसहरूसँग बाझाबाझ गर्दै हामी भकुण्डोको आनन्द लिइरहेका थियौँ । अब नियास्रो लाग्ने भयो हामीलाई । अब हामी कोसँग निहुँ खोज्ने ? के कुरामा खण्डित हुने होला लौ ? यो कुराको उत्तर पाइएला कि भनेर फाफुरा उही भरपर्दो रत्नपार्कमा पुग्यो र टोपीले मुख छोपेर सुत्यो । नभन्दै एकै छिनमा उसको मगजमा झिलिक्क आयो, हामीलाई जुट्ने कारण खोज्न पो गाह्रो हो त । किनभने त्यो आफैँले खोज्नुपर्छ । फुट्ने कारण त नाथे जति पनि पाइन्छ । किनभने त्यो त अरुले पनि खोजीखोजी हाम्रो अगाडि ल्याइदिन्छन् । दुखै गर्नु पर्दैन । कुनै न कुनै विषयमा हामी भर्खर हेरेको भकुण्डोको जोसमा विभिन्न समूहमा विभाजित हुन्छौँ, एकले अर्काको घुँडो र पिँडुला ताक्न थाल्छौँ । अनि सामाजिक भनिने सञ्जालमा हामी असामाजिकरुपमा प्रस्तुत हुन थालिहाल्छौँ ।
मंगलबार, साउन १, २०७५ मा प्रकाशित